NYI LYNN SECK 18+ DEN: July 2012
Electronic Transaction Law of Myanmar 5/2004
(နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၅/၂၀၀၄)
၁၃၃၆ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၂ ရက်
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပဒေကို အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
၂။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် စေရမည် -
(က) သတင်းအချက်အလက် (Information) ဆိုရာတွင် အချက်အလက် (Data) မူရင်းစာ (Text) ပုံရိပ်သဏ္ဍာန် (Image) အသံ၊ သင်္ကေတ (Code) ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ (Software) နှင့် အချက်အလက် အစုအဝေး (Database) တို့ ပါဝင်သည်။
(ခ) အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း (Electronic Records) ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက် စနစ်တစ်ခုတွင် သော်လည်းကောင်း၊သတင်းအချက်အလက် စနစ်တစ်ခုမှ အခြားစနစ်တစ်ခုသို့ ပေးပို့ရေးအတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အလင်းတန်း ဖြတ်သန်းခြင်းနည်း (Optical means) ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလားတူ အခြားနည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သတင်းအချက်အလက် တစ်ခုခုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော၊ ပေးပို့သော၊ လက်ခံရယူသော သို့မဟုတ် သိုမှီးထိန်းသိမ်းသော အထောက်အထားမှတ်တမ်းကို ဆိုလိုသည်။
(ဂ) အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက်သတင်းလွှာ Electronic Data message) ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် အပြန်အလှန်ပို့ဆောင်သည့် အီးဒီအိုင်စနစ် (Electronic data interchange)၊ ဖက်စ်၊ အီးမေးလ်၊ ကြေးနန်း၊ တဲလက်စ်နှင့် တယ်လီကော်ပီတို့ အပါအ၀င် အီလက်ထရောနစ် နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလင်းတန်း ဖြတ်သန်းခြင်း နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အလားတူ အခြားနည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ပေါ်စေသော ပေးပို့သော၊ လက်ခံရယူသော သို့မဟုတ် သိုမှီးထိန်းသိမ်းသော သတင်းအချက်အလက်ကို ဆိုလိုသည်။
(ဃ) ကွန်ပျူတာ ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှတ်တမ်းများရယူခြင်း၊ ထားရှိခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ သိုမှီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သောအချိန်၌ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်၍ အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လည်းကောင်း၊ သင်္ချာဆိုင်ရာနှင့် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သံလိုက်ဓါတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အလင်းတန်း ဖြတ်သန်းခြင်းနည်း ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလားတူ အခြားနည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာကို ဆိုလိုသည်။
(င) ကွန်ပျူတာကွန်ရက် (Computer network) ဆိုသည်မှာ ဂြိုလ်တုမှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်း နည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်မှ တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသော ကွန်ရက်စနစ်ကို ဆိုလိုသည်။
(စ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ် (Electronic signature) ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်း၏ ပင်ရင်း စစ်မှန်ကြောင်းနှင့် ပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် အစားထိုးမှု မရှိကြောင်းတို့ကို အတည်ပြုရန် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလားတူ အခြားနည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စား စီစဉ်ထားသည့် သင်္ကေတသို့မဟုတ် အမှတ်အသားကို ဆိုသည်။
(ဆ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ (Certification authority) ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က ဤဥပဒေ ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကို ရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။
(ဇ) သက်သေခံလက်မှတ် (Certificate) ဆိုသည်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးသူနှင့် ထိုးမြဲလက်မှတ် ဖန်တီးသော အချက်အလက်တို့၏ ဆက်နွယ်မှုကို သေချာစေသည့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာ သို့မဟုတ် အခြားမှတ်တမ်းအဖြစ် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက ငှားရမ်းသုံးစွဲသူ (Subscriber) အား ထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဈ) မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူ (Originator) ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်စေ၊ စတင်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်စေ၊ ပေးပို့ရန်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်ရွက်သူသို့မဟုတ် ထိုသူ၏ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကြားခံဆောင်ရွက်သူ မပါဝင်။
(ည) လက်ခံသူ (Addressee) ဆိုသည်မှာ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူက ပေးပို့သည့် အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာကို လက်ခံရရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်းသို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်သတင်းလွှာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကြားခံဆောင်ရွက်သူ မပါဝင်။
(ဋ) ငှားရမ်းသုံးစွဲသူဆိုသည်မှာ သက်သေခံလက်မှတ်တွင် နည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်အရ အမည်ဖော်ပြထားသော အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ် ရေးထိုးသူအမှတ်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ် ကိုဆိုသည်။
(ဌ) ဗဟိုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသော အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
(ဍ) ၀န်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။
(ဎ) ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေး ကြီးကြပ်မှု အဖွဲ့ကို ဆိုသည်။
၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က) ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာဖြင့် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်။
(ခ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ အပါအ၀င် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာစေရန်။
(ဂ) ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကို အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စများတွင် အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာများ၏ စစ်မှန်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဥပဒေအရ အကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်။
(ဃ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်း အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထုတ်လွှင့်ပေးပို့ခြင်း၊ လက်ခံဖမ်းယူခြင်းနှင့် သိုမှီးထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန်။
(င) ကွန်ပျူတာကွန်ရက်ကို အသုံးပြု၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ထိရောက်လျင်မြန်စွာ ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
(က) ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များသည် ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံမှု၊ လုပ်ငန်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှု၊ စီစဉ်မှု၊ သဘောတူညီမှု၊ ပဋိညာဉ်ချုပ်ဆိုမှု၊ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုနှင့် သိုမှီးထိန်းသိမ်းမှုများ အပါအ၀င် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်တွင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော ကိစ္စရပ်များတွင်ဖြစ်စေ အသုံးပြုသည့် အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာ အမျိုးအစား တစ်မျိုးမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။
(ခ) မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြည်တွင်းတွင် ကျူးလွန်လျှင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းမှ ပြည်ပသို့လည်းကောင်း၊ ပြည်ပမှ ပြည်တွင်းသို့လည်းကောင်း၊ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ကျူးလွန်လျှင်ဖြစ်စေ ဤဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။
၅။ ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များသည် အောက်ပါတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ -
(က) အမွေဆက်ခံခြင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ - ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဇ)တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသောသေတမ်းစာ၊
(ခ) လွဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်းများ၊ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၃ တွင် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားသော လွှဲပြောင်းနိုင်သော စာချုပ်စာတမ်း၊
(ဂ) ယုံကြည်အပ်နှံမှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၃ တွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသော ယုံကြည်အပ်နှံမှု။
(ဃ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း အက်ဥပဒေအရ ပေးအပ်သော ကိုယ်စားလှယ်စာ
(င) ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာတမ်းအမှတ်အသားများ။
(စ) တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင် မှတ်ပုံတင်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသည့် စာချုပ်စာတမ်းများ။
(ဆ) ၀န်ကြီးဌာနက အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော ကိစ္စများ။
အီလက်ထရောနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
၆။ အစိုးရအဖွဲ့သည် -
(က) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးက ဥက္ကဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက အဖွဲ့ဝင်မျာအဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်စေလျက် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဒုတိယဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ် တာဝန် ပေးနိုင်သည်။
(ဂ) ဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၇။ ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(က) ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရာတွင် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စီမံချက်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ခ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်စဉ်တွင် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖေါ်ခြင်း။
(ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်လျင်မြန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေရေးရာများ၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(ဃ) အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င) ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း။
(စ) မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်း အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း။
၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် တစ်ရပ်ရပ်ကို သင့်လျော်သည့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား လွှဲအပ်တာဝန် ပေးနိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
၉။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် -
(က) ဤဥပဒေပါ ကိစ္စရပ်များအလို့ငှာ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်နိုင်ရန် သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
၁၀။ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အောက်ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည် -
(က) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း။
(ခ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲသူတို့အကြား ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း။
(ဂ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် စံများကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသူက ထိန်းသိမ်းရမည့် စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုလည်းကောင်း သတ်မှတ်ခြင်း။
(ဃ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ၀န်ထမ်းများတွင် ရှိရမည့် အရည်အချင်းနှင့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို သတ်မှတ်ခြင်း။
(င) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲသူတို့အကြား အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်သော အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းခြင်း။
(စ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ အခြားသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ပူးပေါင်း၍ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်သည့် အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရေးစနစ် တည်ထောင်မှုကို အကူအညီပေးခြင်း။
(ဆ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက ထုတ်ဖေါ်ထားသော အများပြည်သူ အသုံးပြုမည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် အချက်အလက် အစုအဝေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
(ဇ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိုမှီးထိန်းသိမ်းထားသည့် မှတ်တမ်းစာရင်း၊ အချက်အလက်နှင့် အထောက်အထားများကို လိုအပ်ပါက ကူးယူခြင်း၊ မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ ထုတ်နှုတ်ယူခြင်းနှင့် ယင်းတို့ကို စစ်ဆေးခြင်း။
(ဈ) ကွန်ပြုတာစနစ်တစ်ခု၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာကို ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသုံးပြုနေသည် သို့မဟုတ် အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်ဟု သံသယဖြစ်ရန် အကြောင်းရှိပါက ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။
(ည) ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သော အချက်အလက် အထောက်အထား များကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှ ဖေါ်ထုတ်ရယူခြင်း
(ဋ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။
(ဌ) ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာခြင်း ရှိ/မရှိ စီစစ်နိုင်ရန် လိုအပ်သလို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။
(ဍ) ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ အသိအမှတ်ပြုခြင်း။
(ဎ) မိမိ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း။
(ဏ) ဗဟိုအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ ၀န်ကြီးဌာနကဖြစ်စေ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့် အခြားလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၁။ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် လိုအပ်ပါက မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကို အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ ဖြစ်စေ၊ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးဦးအားဖြစ်စေ ဗဟိုအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လွှဲအပ်တာဝန် ပေးနိုင်သည်။
၁၂။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူအဖြစ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုပါက လိုင်စင်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရမည်။
၁၃။ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် ပုဒ်မ - ၁၂ အရလိုင်စင်လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား စည်းကမ်း ချက်များသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၁၄။ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် -
(က) ကွန်ပျူတာဟတ်ဒ်ဝဲ (Hardware)၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ကွန်ပျူတာလုပ်ထုံးများကို ၀င်ရောက် နှောက်ယှက်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မရှိစေရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စနစ်ကို အသုံးပြုရမည်။
(ခ) မိမိရည်ရွယ်သော လုပ်ငန်း၏ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကိုက်ညီသော ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် သင့်လျော်သော ယုံကြည်အားထားရမှု အဆင့်တစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။
(ဂ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်များ၏ လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုကို လုံခြုံမှု နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) သတ်မှတ်ထားသော စံများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(င) အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ဖေါ်ပြရမည်။
(စ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော မိမိလက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုကို ဖေါ်ပြရမည်။
(ဆ) ထုတ်ပေးသည့် သက်သေခံလက်မှတ်၏ ယုံကြည်အားထားရမှုကိုဖြစ်စေ၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု သို့မဟုတ် အာမခံနိုင်မှုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်း၏၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို ဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အချက်များကို ဖေါ်ပြရမည်။
(ဇ) သက်သေခံလက်မှတ်တွင် ခွင့်ပြုထားသော အခြေအနေကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာစနစ်၏ ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်စေ ထိခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အခြေအနေများရှိလာပါက -
(၁) ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား ဖြစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် အသိပေး အကြောင်းကြားရမည်။
(၂) အထက်ပါ အခြေအနေနှင့် ဖြစ်ပေါ်မှုများအတွက် သက်သေခံ လက်မှတ်ကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာ၌ လိုက်နာရန် သီးခြား သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဈ) ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် တာဝန်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
(က) ပုဒ်မ-၁၃ အရ ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ကို ရရှိသော သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရဖြစ်စေ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးအတွက် အဆိုပြုချက်ကို တင်ပြရာတွင် ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က ထုတ်ပေးသော လိုင်စင်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါက ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို တောင်းခံနိုင်သည်။
(က) ငှားရမ်းသုံးစွဲသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသူသည် သက်သေခံလက်မှတ် ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူထံ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟု သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၁၇။ ငှားရမ်းသုံးစွဲသူသည် -
(က) အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ် ထုတ်ဖေါ်သည့်အချက်အလက်ဖြင့် တရားဝင်သော ထိုးမြဲ လက်မှတ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ယင်းထုတ်ဖေါ်သည့် အချက်အလက်ကို အခြားသူများ တရားမ၀င် အသုံးပြုခြင်း မခံရစေရန် ဂရုစိုက်ရမည်။
(ခ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်အတွက် ထုတ်ပေးထားသော သက်သေခံလက်မှတ်ကို ခွင့်ပြုထားသော သက်တမ်းကာလအတွင်း အသုံးပြုရာတွင် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများသော်လည်းကောင်း၊ ထပ်မံထည့်သွင်းရန် ဖြစ်သည့် အကြောင်းအရာများ သော်လည်းကောင်း တိကျပြည့်စုံပြီး မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ဂရုစိုက်ရမည်။
(ဂ) အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်ထုတ်ဖေါ်သည့် အချက်အလက်လျှို့ဝှက်မှု ပေါက်ကြားလျှင် ဖြစ်စေ၊ လျှို့ဝှက်မှု ပေါက်ကြားနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုး ရောက်ရှိနေလျှင်ဖြစ်စေ၊ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ခွင့် ရှိသူက စီစဉ်ပေးသည့် အတိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ သင့်လျော်သည့် အစီအစဉ်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်နှင့် လုပ်ငန်း ဆက်စပ် ပတ်သက်နေသူများထံ နှောက်နှေးကြန့်ကြာခြင်း မရှိစေဘဲ အကြောင်းကြားရမည်။
၁၈။ ပုဒ်မ-၁၇ တွင် ဖေါ်ပြထားသော အချက်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှု အကျိုးဆက်များအတွက် ငှားရမ်းသုံးစွဲသူတွင် တာဝန်ရှိစေရမည်။
အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း၊ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်များ
(က) တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ စာဖြင့် ရေးသားရမည်ဟုလည်းကောင်း၊ လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်ဟု လည်းကောင်း၊ ပြဌာန်းထားသည့် အကြောင်းအရာများကို အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း၊ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ပြုလုပ်ထားသော အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း၊ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ပြုလုပ်ဘိသကဲ့သို့ တရားဝင်စေရမည်။
၂၀။ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့သည် အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း၊ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်ပေးပို့ခြင်း၊ လက်ခံရယူခြင်းနှင့် သိုမှီးထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့ရာတွင် မိမိတို့အချင်းချင်း သီးခြားသဘောတူညီချက် ရှိပါက ထိုသဘောတူညီသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ပဋိညာဉ်များ
၂၁။ ပဋိညာဉ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပဋိညာဉ်ပြုလုပ်သူများအကြား အခြားနည်းဖြင့် သဘောတူညီချက် မရှိလျှင် ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံခြင်းနှင့် အခြားလိုအပ်သော အချက်အလက် ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၂၂။ အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာတို့ကို မူလဆောင်ရွက် ပေးပို့သူ ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်စေ၊ ယင်း၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူက ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူက အလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်စနစ် ဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့ခဲ့လျှင် မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူ၏ အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၃။ လက်ခံသူသည် အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီလိုပါက မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာ အမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မှတ်ယူပြီး ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည် -
(က) လက်ခံသူနှင့် မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူတို့ သဘောတူညီထားသည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ အသုံးပြု ပေးပို့ခဲ့ခြင်း။
(ခ) မူလဆောင်ရွက် ပေးပို့သူနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသူက ဖြစ်စေ၊ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူ၏ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူက ဖြစ်စေ ပေးပို့သည်ကို လက်ခံသူက လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်ပြီး မူလဆောင်ရွက် ပေးပို့သူ အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ပေးပို့ခဲ့ခြင်း။
၂၄။ အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာကို ပေးပို့ဆဲ ဖြစ်စေ၊ မပေးပို့မီဖြစ်စေ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့သည် -
(က) အောက်ပါတစ်နည်းနည်းဖြင့် လက်ခံရရှိကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည် -
(၁) လက်ခံသူက ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အလိုအလျောက်နည်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အခြား တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ် ပြန်ကြားခြင်း။
(၂) လက်ခံသူက လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူသို့ လုံလောက်သော ညွှန်ပြမှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်ခြင်း။
(ခ) လက်ခံရရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သီးခြားသဘောတူညီချက် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၂၅။ အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာ လက်ခံကြောင်း အသိအမှတ်ပြုချက်ကို လက်ခံရရှိမှသာ အတည်ဖြစ်ရမည်ဟု မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူက -
(က) သတ်မှတ်ထားသည့် ကိစ္စတွင် လက်ခံကြောင်း အသိအမှတ်ပြုချက်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်း မရှိလျှင် မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူက မည်သည့်အခါမျှ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းမရှိဟု မှတ်ယူရမည်။
(ခ) သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသည့် ကိစ္စတွင် သီးခြားသတ်မှတ် သဘောတူညီထားသည့် အချိန်အတွင်း ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါက သင့်လျော်သည့် အချိန်အတွင်းဖြစ်စေ၊ လက်ခံကြောင်း အသိအမှတ်ပြုချက်ကို မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူက လက်ခံရရှိခြင်း မရှိလျှင် မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူသည် ထိုသို့ မရရှိကြောင်း လက်ခံသူသို့ အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
၂၆။ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့အကြား ပို့လွှတ်သည့် အချိန်နှင့် လက်ခံသည့် အချိန်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သီးခြား သဘောတူညီချက် မရှိလျှင် အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်းသို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာကို -
(က) ပို့လွှတ်သည့်အချိန်သည် မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူ သို့မဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စားလှယ်၏ ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိ သတင်းအချက်အလက် စနစ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
(ခ) လက်ခံသည့်အချိန်သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -
(၁) သတ်မှတ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်စနစ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သည့်အချိန်။
(၂) လက်ခံသူက သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော သတင်းအချက်အလက်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါက လက်ခံသူက လက်ခံရရှိသည့် အချိန်။
(၃) သတ်မှတ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်စနစ် မရှိပါက လက်ခံသူ၏ သတင်း အချက်အလက် စနစ်အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သည့်အချိန်။
၂၇။ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့သည် -
(က) သီးခြားသဘောတူညီချက်မရှိလျှင် မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူ၏ လုပ်ငန်းတည်ရှိသော နေရာကို ပို့လွှတ်သည့် နေရာဟုလည်းကောင်း၊ လက်ခံသူ၏ လုပ်ငန်းတည်ရှိသော နေရာကို လက်ခံသည့်နေရာဟု လည်းကောင်း မှတ်ယူရမည်။
(ခ) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နေရာထက်ပို၍ လုပ်ကိုင်ပါက အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် နေရာကိုလည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် နေရာမရှိပါက ထိုသူအမြဲတမ်း နေထိုင်သော နေရာကိုလည်းကောင်း အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ထားသော နေရာကိုလည်းကောင်း အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာဟု မှတ်ယူရမည်။
၂၈။ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက လိုင်စင်စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ဖြစ်စေ အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်နိုင်သည် -
(ခ) လိုင်စင်ကိုကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း။
၂၉။ သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ငှားရမ်းသုံးစွဲသူက သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်း ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူအား အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။
(က) သက်သေခံလက်မှတ်ကို ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း။
(ခ) သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း။
ပြင်ဆင်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် အယူခံခြင်း
(က) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူက သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ သက်သေခံလက်မှတ်ကို ကာလ အကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို မကျေနပ်သူသည် အဆိုပါ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ထံ ပြင်ဆင်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(ခ) ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူက ချမှတ်သောအမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(က) ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသော ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်း၊ လိုင်စင်ကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ-၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ချမှတ်သည့် အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ မကျေနပ်သူသည် အဆိုပါ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ဗဟိုအဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့သည် ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က ချမှတ်သောအမိန့်သို့မဟုတ် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၃၂။ ဗဟိုအဖွဲ့က ပုဒ်မ-၃၁၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ချမှတ်သည့် အဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။
၃၃။ မည်သူမဆို အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အောက်ပါ ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး (၇)နှစ်မှ အများဆုံး (၁၅)နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည် -
(က) နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ထိခိုက်စေသည့် ပြုလုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း။
(ခ) နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတော်၏ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ပေးပို့ဖြန့်ချီခြင်း။
၃၄။ မည်သူမဆို အောက်ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည် -
(က) အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက် သတင်းလွှာသို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ် တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ပရိုဂရမ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေခြင်း။
(ခ) မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကျွန်ပျူတာကွန်ရက်အတွင်း ဆက်သွယ်မှု တစ်ခုခုကို ကြားဖြတ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု တစ်ခုခုတွင် ပါဝင်သည့် အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူ တစ်ဦးဦးသို့ ထုတ်ဖေါ်ခြင်း။
(ဂ) ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက် မရှိဘဲ ထိုသူ၏ လုံခြုံမှုအဆင့် ထားရှိသောအမှတ်၊ စကားဝှက် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်ဖြင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်အသုံးပြုခြင်း။
(ဃ) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ထိခိုက်နစ်နာစေရန် ဖြစ်စေ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေရန် ဖြစ်စေ၊ သတင်းအချက်အလက်ကို အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း ပြုလုပ်ထားသည့် အချက်အလက်ကို ဖြန့်ချီခြင်း။
၃၅။ မည်သည့်သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ ယင်း၏အရာရှိသို့မဟုတ် ၀န်ထမ်းမဆို ကြီးကြပ်မှု အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သောအမိန့်ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၆။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသော နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့် အမိန့်များပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
၃၇။ မည်သူမဆို အောက်ပါပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူအား ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
(က) သက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင်ဖြစ်စေ၊ သက်သေခံလက်မှတ်ကို ရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းရန် တင်ပြရာတွင်ဖြစ်စေ မိမိ၏ အထောက်အထားသို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ကို သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူထံ သိလျက်နှင့် မမှန်မကန် တင်ပြခြင်း။
(ခ) ဤဥပဒေနှင့် အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်သော ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ယင်းကတာဝန်လွှဲ အပ်ခြင်း ခံရသည့်အဖွဲ့သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့နှင့် ယင်းကတာဝန်လွှဲ အပ်ခြင်း ခံရသည့် အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေ၊ ဟန့်တားခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ လက်ရောက်မှုပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း။
၃၈။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ပူးပေါင်းကြံစည်၍ ပြစ်မှုမြောက်သော ပြုလုပ်မှုကို ပြုလုပ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အားပေးကူညီလျှင်ဖြစ်စေ ယင်းပြစ်မှုအတွက် ဤဥပဒေတွင် ပြဌာန်းထားသည့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရမည်။
၃၉။ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ဆောင်ရွက်ရမည် -
(က) စာတမ်းအမှတ်အသားများကို တင်သွင်းခြင်း၊ လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
(ခ) ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်နှင့် သဘောတူညီချက်များ ထုတ်ပေးခြင်း။
(ဂ) ပေးချေရမည့် ငွေကြေးကို တောင်းဆိုခြင်း၊ ပေးချေခြင်း၊ လက်ခံခြင်းနှင့် လက်ခံပြေစာ ထုတ်ပေးခြင်း။
၄၀။ အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများသည် အီလက်ထရောနစ် မှတ်တမ်းနှင့် အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက် သတင်းလွှာတို့၏ လိုအပ်သည့် လုံခြုံမှုအမျိုးအစားနှင့် အဆင့်တို့ကို သတ်မှတ်ပြီး မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် နည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်အသုံးပြု၍ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄၁။ ၀န်ကြီးဌာနသည် သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်ခနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခတို့ကို သတ်မှတ်ရမည်။
၄၂။ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် ဤဥပဒေအရ ရရန်ရှိသည့် အခကြေးငွေနှင့် ဒဏ်ကြေးငွေများပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သူထံမှ ထိုအခကြေးငွေနှင့် ဒဏ်ကြေးငွေများကို မြေခွန်မပြေကျန်ငွေဖြစ်ဘိသကဲ့သို့ အရကောက်ခံခွင့် ရှိသည်။
၄၃။ ၀န်ကြီးဌာနသည် -
(က) အစိုးရ၀န်ထမ်း မဟုတ်သော ဗဟိုအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအား ချီးမြှင့်ငွေ သတ်မှတ်ခံစားခွင့် ပြုနိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးရမည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ကျခံရမည်။
၄၄။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုရာတွင် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
၄၅။ ဤဥပဒေပါ မည်သည့်ပြစ်မှုကိုမဆို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၄၆။ ဤဥပဒေအရ တရားစွဲတင်ပို့သော ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သက်သေခံပစ္စည်းသည် တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန် မလွယ်ကူသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါက ယင်းသက်သေခံပစ္စည်းကို တရားရုံးရှေ့သို့ တင်ပို့ရန် မလိုဘဲ မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အစီရင်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာ အခြားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြနိုင်သည်။ ယင်းသို့တင်ပြခြင်းကို တရားရုံးသို့ သက်သေခံပစ္စည်း တင်ပြဘိသကဲ့သို့ မှတ်ယူကာ သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၄၇။ သက်သေခံအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၄၅ တွင် ရည်ညွှန်းသည့် ကျွမ်းကျင်သူများ ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့၊ ယင်းအဖွဲ့က တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူတို့ ပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူမည်။
၄၈။ မူလဆောင်ရွက်ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူတို့အကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည့် သတင်းအချက်အလက်၊ အီလက်ထရောနစ်မှတ်တမ်း၊ အီလက်ထရောနစ်အချက်အလက် သတင်းလွှာ၊ အီလက်ထရောနစ် ထိုးမြဲလက်မှတ်နှင့် အခြားစာတမ်း အမှတ်အသားများကို အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည် ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဥပဒေအရ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တရားဝင်မှု သို့မဟုတ် အတည်ဖြစ်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်း မပြုရ။
၄၉။ ဤဥပဒေအရ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သော ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ယင်းကတာဝန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေ၊ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့နှင့် ယင်းကတာဝန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေ၊ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူကိုဖြစ်စေ တရားမကြောင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိစေရ။
၅၀။ ၀န်ကြီးဌာနသည် ဤဥပဒေပါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစကားရပ်တစ်ခုခု၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းလင်းပေးရန် လိုအပ်လျှင် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
၅၁။ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင် ပြဌာန်းပါရှိစေကာမူ ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွတ်မှုမရှိသော သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲသော ပြဌာန်းချက်များကို ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များက လွှမ်းမိုးစေရမည်။
၅၂။ ဤဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် -
(က) ၀န်ကြီးဌာနသည် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် ၀န်ကြီးဌာနတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လည်းကောင်း၊ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့သည် လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်များကို လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
Posted by NLS at 7/13/2012 11:23:00 AM2comments Links to this post
Myanmar Electronic Transaction Law 5/2004
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသည် အောက်ပါဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။
၁။ ဤဥပဒေကို အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(ဃ) ကွန်ပျူတာ ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှတ်တမ်းများရယူခြင်း၊ ထားရှိခြင်း၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပေးပို့ခြင်း၊ သိုမှီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သောအချိန်၌ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်၍ အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လည်းကောင်း၊ သင်္ချာဆိုင်ရာနှင့် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ဖြစ်စေ၊ သံလိုက်ဓါတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ အလင်းတန်း ဖြတ်သန်းခြင်းနည်း ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလားတူ အခြားနည်းပညာ တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပစ္စည်း ကိရိယာကို ဆိုလိုသည်
(ခ) သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်၍ သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟု သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
၂၉။ သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် ငှားရမ်းသုံးစွဲသူက သက်သေခံလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်း ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ဤဥပဒေပါပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူအား အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်သည်
၄၁။ ၀န်ကြီးဌာနသည် သက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုင်စင်သက်တမ်း၊ လိုင်စင်ခနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခတို့ကို သတ်မှတ်ရမည်။
Posted by NLS at 7/13/2012 03:09:00 AM0comments Links to this post
ကလေးလေး ဖိုအင်္ဂါ မအင်္ဂါ နှစ်ခု ပါနေတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဘာကြောင့် ရှဲ နေကြတယ် နားမလည်ဘူး။ ဟိုမိဘတွေက ချို့တဲ့ရှာလို့ ထားပါတော့။ ကိုယ့်သားသမီးသာ ဒီလိုဖြစ်နေရင် သူများတွေ ကြည့်ပါစေဆိုပြီး ဖြန့်မလား။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မမြင်ဖူးရင်ကြည့် တော်ရောပေါ့။ ဘာအတွက်နဲ့ အုတ်အော်သောင်းနင်း လျှောက်ရှဲနေကြတာလဲ နားမလည်နိုင်ဘူး။ အဲဒီကလေး အသက်ကြီးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ရှက်ရှာမှာပေါ့။ ဒါလေးတောင် နားမလည်ကြဘူးလား။ ၂၀၀၉ လောက်တုန်းက ဒါမျိုး ကလေးလေးတစ်ယောက် တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ခွဲစိတ်ဖို့ မတတ်နိုင်လို့တဲ့ အကူအညီတောင်းတော့ ဆရာဝန်တချို့က ကျွန်တော့်ကို အကူအညီတောင်းတာနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ကူညီပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေ ကျွန်တော် မတင်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် ရှိနိုင်ကြပါစေ။
တဘက်လောက်ဆို ဟုတ်သေး။ ဘယ်သူ့ ပုဆိုးကြီး အုပ်ပေးထားတယ် မသိဘူး။ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကမ္ဘာ့ဂုဏ်ပြုခံ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ဒီလို မခန့်မထည် လုပ်ထားတာ မျက်စိအမြင် မတင့်တယ်ပေဘူး။ တရားခံ ဘယ်သူလဲ ???? အစိုးရပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာအောင် စနစ်တကျ စီမံထားတာ။ သက်သက် သိက္ခာချတာ။ တောက်!!!
မြန်မာစကားလုံး ပြောင်းထုံးကျမ်း ဆိုတာ ရှိတယ်။ စာလုံးတွေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကို ပြထားတာ။ အခုချိန် လိုက်ရှာရင်တောင် အတော်ရှာယူရမယ်။ စာအုပ်က စာမျက်နှာ တစ်ထောင်လောက် ရှိမယ်။ ရရင်တောင် အနည်းဆုံး ၂သောင်းလောက်တော့ ပေးရမယ် ထင်ရဲ့။ ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့ ကိုယ်တော်တိုင်ကတော့ စာအုပ်အမည်ကို အဲဒလို ပေးခဲ့ဖူးသဗျ။ ဟိုးရှေးအင်္ဂလိပ်တွေကတော့ ဘားမားလို့ ခေါ်တယ်။ အင်း ခေါ်မှာပေါ့ သူတို့မှာမှ ဗျည်းတွဲ ရရစ်သံ မရှိတာကိုး ထားတော့။ ဟဲဟဲဟဲ တကယ်တမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့တွေဟာ ဟိုးရှေးတုန်းက ဗြဟ္မာကြီးတွေပဲ။ ဗြဟ္မာဒေသ ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ဘုံဗိမ္မာန်နေရာကြီးပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် ကျုပ်တို့နေရာ အရပ်ကို ဗြဟ္မာပြည်၊ ကျုပ်တို့ကိုတော့ ဗြဟ္မာကြီးများလို့ အမည်သတ်မှတ်ပေးဖို့ အဆိုပြုချင်ပါတယ်။ (ပုံ-ဗြဟ္မာအကျင့် မကျင့်သူ ဗြဟ္မာတစ်ဦး)
ဝင်းဖေ စာအုပ်ထဲက မြို့ဟောင်းမှ ဦးခင်မောင်ညိုသို့ (၃၅)နှစ် ဝတ္ထုလေးများ ဖတ်ကြည့် ၀တ္ထုသုံးချိုးတစ်ချိုး ရောက်တာနဲ့ တစ်ခုခုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာပြီး ရယ်ချင်လာလိမ့်မယ်။ ဟက်ဟက်။ ဦးခင်မောင်ညိုဆိုတာက ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းကနေ ရန်ကုန်ကို တက်လို့ ကောလိပ်တက္ကသိုလ်တွေ အောင်ပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်နေတဲ့လူ။ ကျေးတောသား ဦးဖိုးထင်ခမျာ သူတို့ရွာဂုဏ်ဆောင် ဦးခင်မောင်ညို လာတယ်ဆိုလို့ နွားတွေကို လွှတ်ကွင်းထဲ ပစ်ထားပြီး လာကြည့်တော့ ဘဘုန်းကြီးက ပိတ်ဆူလွှတ်တာပေါ့။ ဟေ့ကောင် ခွေးမသား နွားတွေ ပစ်ထားပြီး ဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲတဲ့။ သူ့ခမျာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ကျုပ်..ကျုပ်.. ကိုရင်ခင်မောင်ညို လာ.. လာ.. လာတယ်ဆိုလို့ လာကြည့်တာပါဗျာလို့ ပြန်ဖြေတော့ ဘုန်းကြီးက သူ့ကို မဆူတော့ဘဲ အလကားတောသား နောက်ကို ကိုရင်ခင်မောင်ညို မခေါ်နဲ့ ဦးခင်မောင်ညိုလို့ ခေါ်ရမယ်ဆိုပြီး မိန့်လွှတ်လိုက်သတဲ့။ တစ်ရက် ဦးဖိုးထင် နဲ့ ဦးခင်မောင်ညို ရွာတောင်ဘက်က လမ်းကြားလေးမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ တွေ့တော့ သူ့ခမျာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ရင်တွေပန်းတွေတောင် တုန်ရသတဲ့။ ပြီးတော့ ဦးခင်မောင်ညို အရိပ်ကို နင်းမိမှာစိုးလို့ လမ်းတစ်ဖက်ကို တအားကပ်ပေးလိုက်သတဲ့။ ဘယ်ကလာတာလဲ ကိုဖိုးထင်လို့ ဟိုက နှုတ်ဆက်တော့ ဪ ဒီးနားတင်ကပါပဲ ဘုရား.. ဆိုပြီးတော့တောင် ယောင်သွားမိသတဲ့လေ။ ဇာတ်လမ်းက ဒီနေရာမှာ တစ်ဝက်ပြီးတယ်။ တစ်ရက်တော့ ဦးခင်မောင်ညိုခမျာ လင်းအားကြီး မျက်နှာသစ်ဖို့ ရေခွက်အယူမှာ ခွေနေတဲ့ မြွေပွေးက နထင်တည့်တည့် ပေါက်တော့ တစ်ခါထဲ ကိစ္စပြတ်သွားကရောတဲ့။ ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက ဒုတိယပိုင်း စတယ်။ ဒီဝတ္ထုကို ဒီနေရာမှာ ရပ်လိုက်ရင် ဟုတ်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဝင်းဖေက မရပ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်သွားလိုက်တာ ဇာတ်လမ်းလည်းဆုံးရော အောချလိုက်ရပါလေရောဗျား။ ဖတ်ကြည့်ပါ။ :)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံခြားသွားတာ သူ့ကိစ္စနဲ့သူသွားတာမို့ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ဆိုထားပြီးတော့မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သူ့ဟာသူ နိုင်ငံခြားသွားပြီး သူ့ဟာသူ ဗမာပြောပြော မြန်မာပြောပြော အကျယ်တဝင့် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး သတင်းစာထဲထည့် ကန့်ကွက်တာမျိုးကတော့ လူရယ်စရာကြီး ဖြစ်နေတယ်။ စောက်တင်းတုပ်ချင်လို့ FB ထဲ Request လာလုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းဖွဲ့ ကောင်းတာလေးတွေ့ရင်တော့ ငြိမ်နေ၊ အပြစ်လေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ချက်ချင်း အပြင်မှာ ပြန်တုပ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်။
Mutual Respect ရှိကြတဲ့ လူတွေ အချင်းချင်းပဲ အသက်ကြီးကြီး ငယ်ငယ် ပေါင်းလို့သင်းလို့ ကောင်းတယ်။ တချို့လူတွေကို အရောတဝင် မဆက်ဆံသင့်ဘူး။ တချို့လူတွေကို ခပ်ကင်းကင်း နေရာတယ်။ တချို့လူတွေက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မိုက်ရိုင်းတယ်။ ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ပေးနိုင်တဲ့ လူမျိုးလို့ ခံစားရရင် စောစောစီးစီးထဲက ခပ်တန်းတန်းနေတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အားနာနေဖို့ မသင့်ပါ။
ဒေါ်စုကို မုန်းတိုင်းလည်း မြန်မာလို့ အတင်းဖင်ပိတ်ငြင်းဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒေါ်စုကို ချစ်တိုင်းလည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဗမာလို့ အတင်းဖင်ပိတ်ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက် လေ့လာဖူးလို့လည်း အရင် မေးကြည့်ကြပါဦး။ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်နှစ်အုပ် ဖတ်ပြီး သူများ ပြောတိုင်း လိုက်ပြောနေတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှန်ထောင်းနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင် အဘက်ဘက်က လေ့လာပြီး ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှု မပြုနိုင်သရွေ့ ကိုယ့်အတွက်ရော၊ သူများအတွက်ရော၊ တိုင်းပြည်အတွက်ပါ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မကောင်းဘူးဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
သခင်အောင်ဆန်း ဖမ်းဝရမ်းက ၅ကျပ်။ မြတ်ခိုင် အာမခံက သိန်း ၈ ထောင်။ ဒီလူတော့ တစ်သက်လုံး မာန်တက်ပြီး ပြောလို့ဆုံးမယ် မထင်တော့ဘူး။ စိတ်လေ။
အစိုးရက သူတို့လုပ်တာ တစ်ခုခုကို ဂုဏ်ယူစွာ ထုတ်ပြချင်ရင် ၁၉၈၈ မတိုင်ခင်က ဘယ်လောက် တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် ဘယ်လောက် တိုးတက်လာတယ် ဆိုပြီး နှိုင်းပြလေ့ရှိတာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ့်အိမ်နီးနားချင်း တိုင်းပြည်တွေနဲ့တော့ ယှဉ်ပြတာ ဘယ်တော့မှ မတွေ့ရဘူး။ အင်း အနုပညာရှင်တွေ ပြောတတ်တဲ့ သာမီးက ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြိုင်ဘူး သာမီးကိုသာမီးပဲ ပြိုင်တယ်ဆိုတာလေး သွားသတိရတယ်။ အကယ်ဒမီပေးရမယ်။ :)
မွန်ဂိုတွေ မြန်မာပြည် လာသိမ်းတော့ ရှင်ဒိသာပါမောက် စေ့စပ်လို့ တပ်ဆုတ်သွားသတဲ့။ ဘုန်းကြီးလျှောက်ကြားလွှာထဲ မတွေ့ရပေမယ့် မြန်မာတွေဆိုတာ မွန်ဂိုလွိုက်လူမျိုးထဲက ဆင်းသက်လာတာမို့ အမျိုးတူခြင်း မလုပ်ကောင်းပါဘူး ဆိုတာမျိုး ထည့်ပြောခဲ့လို့များ ဟိုက တပ်ဆုတ်ပေးသွားသလား စဉ်းစားမိတယ်။
သစ်တောကလူတွေ ကြိုးဝိုင်းလို နေရာမျိုးထဲမှာတောင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ချင်ရင် တစ်ဧကကို ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ယူထားတာမို့ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်း ကိစ္စကို ပထမဆုံး ကိုင်စေချင်ပါတယ်။ ယာသမားတွေ ခမျာမှာလည်း အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကို ပိုက်ဆံပေးရ၊ ပေါင်းသင်ခုတ်ထွင် ထွန်ယက်ရ၊ အားလုံးပြီးတော့ အစိုးရအမိန့်ဆိုပြီး မောင်းထုတ်လိုက်ကြပြန်ရော ဆိုတော့ သူတို့က မြွေပါလည်းဆုံး သားလည်းဆုံး ဖြစ်နေကြတာပါ။ (ရည်ညွှန်း။ သစ်တောမြေနှင့် အခြားမြေလွတ်မြေရိုင်းများ အခြားမြေများတွင် တရားမဝင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ရာမှ..... သမ္မတမိန့်ခွန်း)
တကယ်တမ်း ဘာသာရေးက သူ့ဟာသူနေတယ်၊ လူတွေက တိုင်လိုက်ပတ်တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ အလှူခံဌာနတွေက တရားရွတ် အလှူခံရင် လော်စပီကာနဲ့ အော်တယ်၊ တခါတလေ တစ်ပတ်ဆယ်ရက် ဆက်တိုက် အသံနဲ့ နှိပ်စက်တယ်။ အစ္စလာမ်ဗလီတွေက မနက်အစောကြီးတစ်ခါ ညတစ်ခါ လော်စပီကာသံနဲ့အော်ပြီး နေ့တိုင်း နှိပ်စက်တယ်။ ဘေးနားက အင်္ဂလိကန်ချာ့(ပ်)က အပေါ်နှစ်ခုလောက် မဆိုးပေမယ့် သူလည်း သူ့ရာသီချိန် ပွဲတော်ချိန်တွေဆို ရူးသွားမယ်။ ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ် လူတွေကို Annoy ဖြစ်အောင် လုပ်တာကို မကြိုက်ပါဘူး။ အားလည်း မပေးပါဘူး။ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူက သွားလိမ့်မယ်။ စိတ်မပါတဲ့သူက မသွားဘူးပေါ့၊ မလုပ်ဘူးပေါ့။ ဒါကြီးကို ခုနကဟာတွေလို အတင်းအဓမ္မ တိုက်တွန်းတာ လုပ်ယူတာက တခြားလူတွေကို စိတ်ညစ်ညူးစေပါတယ်။ မကြားချင်တဲ့ အသံကို ဆန္ဒမပါဘဲ စိတ်ညစ်စွာနဲ့ အကျယ်ကြီး ကြားနေရတာဟာ လူ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ဆုံးရှုံးနေတာပါပဲ။ ဒါက ဘယ်ဘာသာ၊ ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရသင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တစ်မျိုးလို့ ထင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းဖို့ လိုအပ်တယ် ထင်တယ်။
မောင်ဆုရှင်ရဲ့ မြတ်ဘုရားရွှေတိဂုံဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဦးနေဝင်းလက်ထက် ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးပြီး အပေါက်ကြီး ဖြစ်သွားပြီး အထဲက လှိုဏ်ခေါင်းကြီး ပေါ်လာတဲ့ အခါမှ အဓိက တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးလှကြည်ရဲ့ ဆောင်းပါးပါတယ်။ ဆောင်းပါးက အစမှာ ဗုဒ္ဓံပူဇေမိ၊ ဓမ္မံပူဇေမိ၊ သံဃံပူဇေမိနဲ့ စတယ်။ ဆလမ္မာလေးကွန်းနဲ့ အဆုံးသတ်တယ်။ ဦးလှကြည်က မွတ်ဆလင်မို့ ကန့်ကွက်ချင်ရင် အစကတည်းက ကန့်ကွက်ကြပါလို့ ပြောတော့ ဂေါပက အဖွဲ့က ကန့်ကွက်စရာမရှိ ထောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ လုပ်ငန်းဟာ အန္တရာယ် ကြီးတဲ့အပြင် အလွန်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ရတာမို့ ချွတ်ချော်မှု မဖြစ်အောင် အလွန်ဂရုစိုက်ကြရတယ်။ "စေတီတော်ကြီးသာ ပြိုကျသွားရင် ငလှကြည် နင်လည်း သေလိုက်တော့။ ဒီဘုရားကြီးဟာ မြန်မာပြည်သာမဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်းသာမဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသားတွေရဲ့ မေတ္တာစုဝေးရာ ဖြစ်တယ်။ တစ်စုံတစ်ခုသာ လွဲမှားသွားလို့ကတော့ အဲဒီမေတ္တာ စူးတာနဲ့ သေသွားနိုင်တယ်" လို့ ဦးလှကြည်က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလာမ်သာသနာရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး မိုဟာမက်ဂါဇီဟာရှင်က ဖုန်းဆက်ပြီး ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ မောင်လှကြည် အလွန်ကောင်းတဲ့ ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက် တို့က ဂုဏ်ယူပါတယ်တဲ့။ အလွန်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေး တစ်ခုပါ။ ကောင်းတဲ့သူက ကောင်းပါတယ်။ ယုတ်တဲ့သူက ယုတ်ပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ခွဲခြားမြင်တတ်ဖို့ ဆက်ဆံတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မီးတွေပျက်လွန်လွန်းတုန်းက အလုပ်လုပ်ရတာလေးကို သွားသတိရမိတယ်။ အင်ဗာတာဝယ်ရ၊ ဘက်ထရီဝယ်ရ၊ ရက်ဂူလေတာဝယ်ရ။ အဲဒါတွေ ဝယ်ဖို့ အပိုပိုက်ဆံ ရှာဖို့ လုပ်ရ။ အင်ဗာတာက ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သလဲ။ စက်ဘယ်နှစ်လုံး သုံးလို့ရမလဲ တွက်ရချက်ရ၊ ဘက်ထရီက မီးအားဘယ်လောက် ထုတ်ပေးသလဲ၊ ကိုယ့်စက်ဘယ်နှစ်လုံးဆို ဘယ်လောက်အား ဘက်ထရီ ဝယ်ရမလဲ၊ အစိုလား အခြောက်လား။ ဟိုဆိုင်ကဘယ်ဈေး ဒီဆိုင်ကဘယ်ဈေး ဘယ်သူပိုသက်သာသလဲ။ ဝရမ်တီ ပေးသလား။ ဘက်ထရီအစိုဝယ်ရင် အက်ဆစ်ဘယ်အချိန် စစ်ရမလဲ ထည့်ရမလဲ။ မီးပျက်ရင် အင်တာနက် ပျက်သွားလေ့ ရှိသလား။ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် ပေါ့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေ မကျွမ်းကျင်တာတွေ လိုက်လျှောက်စဉ်းစား လေ့လာပြီး အပိုအလုပ် လုပ်ရတာတွေ အများကြီးပဲ။ အခုလို မီးလည်းလာရော အဲဒါတွေအားလုံး ကိစ္စရှင်းသွားရော။ တခါတလေ အခြေခံအကျဆုံးဟာ မရှိတော့၊ မရှိသေးတော့၊ မဖြစ်သေးတော့၊ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ဟာတွေအားလုံးပါ လိုက်စဉ်းစားပြီး လူတွေမှာ ပိုပင်ပန်းရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အစိုးရဘက်က မပွင့်လင်းတော့ အားလုံး လိုက်စဉ်းစားပြီး ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးလား ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စတဲ့ ဟာတွေ လိုက်စဉ်းစားရင်း စိတ်တွေ ပူပန်နေရ ပင်ပန်းနေရတာ ညတွေ အတော်များသွားပြီ :( တကယ်တော့အစိုးရ လုပ်နေရင် ဒါတွေ သူတို့ ရှင်းရမှာပဲ။ သူတို့ တာဝန်ပဲလေ။ အဲဒီမီးလေးလာလိုက်ရင်ပဲ တခြား ဗာဟီရတွေ အများကြီး လျော့သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် အစောကြီးပဲ နာမည်ကျော် ဓာတ်ပုံ ဂျာနယ်လစ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရခိုင်နယ်ထဲမှာ သက်စွန့်ဆံဖျား ဓာတ်ပုံတွေ သွားရောက်ရိုက်ကူးပြီး အဖြစ်မှန်ကို သူတို့မီဒီယာတွေဆီ တင်ပို့ပေးတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘယ်လောက်သောင်းကျန်းလို့ ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်၊ ဒါဟာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ရှင်းပြပေမယ့် သူတို့ မီဒီယာတွေ ကိုယ်တိုင်က ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ-အစ္စလာမ် ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းလို့သာ ခံယူနေကြတာမို့ ဇာတ်လမ်းတွေက တခြားဘက်ကို ဦးတည်သွားရသတဲ့။ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့တွေ ကြားညပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဗမာလိုတွေ ရခိုင်လိုတွေ တွတ်ပြီး လုပ်နေလို့ကတော့ ကမ္ဘာ့နား မပေါက်ဘူး။ ဦးကျော်ဆန်း မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မယ် ဆိုတာကလည်း ဗမာမီဒီယာတွေလောက်သာ ဗမာသံလေးနဲ့ ညဲ့ညဲ့ညဲ့ညဲ့ တိုက်တတ်တာ။ ဒီတော့ကာ ကမ္ဘာ့နား ပေါက်ချင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို တွတ်ပါမှ အဆင်ပြေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
မြန်မာပြည်မယ် နောင်သိပ်မကြာခင် Cyber Crime ကိစ္စတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ အစိုးရက ဒီလို တောင်းဆိုနိုင်ဖို့ အစိုးရကိုယ်တိုင်က၊ တရားသူကြီးတွေက၊ ရှေ့နေတွေက အိုင်တီအကြောင်းကို နောကြေနေအောင် နားလည်မှ ရလိမ့်မယ်။ ဥပဒေကလည်း လိုက်ကန့်သတ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ တိတိကျကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိရမယ်။
ဒီလို ဖိုရမ်မျိုးတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်း ပြောတတ်ဆိုတတ် အချက်အလက် သမိုင်းပိုင်တဲ့ သူမျိုးတွေ သွားတက်ပြီး ဆွေးနွေးသင့်တယ်။ ဒါမှ နိုင်ငံတကာက လူတွေကို ကိုယ့်လူတွေရဲ့ အမြင် ကိုယ့်လူတွေရဲ့ ခံယူချက် စတာတွေ ရှင်းပြ ဆွေးနွေး ချပြနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို သွားတက်နိုင်ဖို့ အဲဒီလူတွေကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Myanmar Foundation တစ်ခု ရှိမယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမယ်။ ဒါမှ တော်ပေမယ့် ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်တဲ့ ဆရာသမားတွေ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ သွားနိုင်မယ်။ ပိုက်ဆံရှိသူများ ပူးပေါင်းပြီး ဖြစ်ဖြစ် ဒါမျိုး Support Organization လေး တစ်ခုလောက် တည်ထောင်ထားရင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲခင်ဗျာ။ နိုင်ငံတကာမှာဆို ဒါမျိုးတွေကို သူဌေးတွေက Backup လုပ်ပေးထားတော့ ပညာရှင်တွေက သွားတက်ရုံပဲ။ ဒီကာလမျိုးမှာ ပိုလို့တောင် လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် သိကျွမ်းတဲ့ အကိုတွေထဲက စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့သူတွေကို Tag လုပ်လိုက်မိတယ်။ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ (Ref: Public forum 'Burma Now: Assessing the Reforms' Ethnic Conflicts, Refugees & Sanctions)
စစ်တပ်မသွားတော့ စစ်တပ်မသွားလို့ စောက်တင်းတုပ်၊ စစ်တပ်သွားပြန်တော့ ဒါက အာဏာသိမ်းဖို့ ဆိုပြီး စောက်တင်းပြော၊ ရခိုင်တွေ သတိရှိရှိနဲ့ အစိုးရခြေလှမ်းတွေကို စောင့်ကြည့်ဆိုပြီး မီးထိုးပေးတဲ့ကောင်က မီးထိုးပေး၊ ကဲ ငါမပြောဘူးလား မာရှယ်လော ထုတ်လိုက်ပြီ ဒါ အကွက်ဆင်တာပဲ ဆိုပြီး ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်တဲ့သူက စူးရောက်။ အစတုန်းကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေ သတ်ပစ်ဆိုပြီး အရူးချီးပန်း အော်လိုအော်၊ အခုကျတော့ ငါတို့များ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဖိနှိပ်ထားသလို ဖြစ်နေလား ဆိုပြီး တွေဝေတဲ့လူက တွေဝေ။ ကဲ ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ့်ခံယူချက် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အကောင်းမြင်တတ်တာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာ လေယူရာမသင့်တာမျိုးရော ရှိရဲ့လားဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ဖို့ပါ။ ကိုယ်မှားလည်း မှားတယ်ပေါ့။ မှန်လည်း မှန်တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် ခံယူချက်တွေကတော့ အောက်ကအတိုင်းပဲ။ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်။
အခုဖြစ်နေတာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို တိုက်ထုတ်နေတာလို့ မခံယူ
အခုဖြစ်နေတာ တရားမဝင် ရိုဟင်ဂျာတွေ မဟားတရား ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာ ခြေစွာနေတာကို တိုက်တာ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို အားလုံးသတ်ပစ်ဆိုတာကို ဆန့်ကျင်တယ်
ရိုဟင်ဂျာတွေ နယ်မြေတောင်းတာကို ဆန့်ကျင်တယ်
ပြည်တွင်းက လူမျိုးခြားမွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ ဒီအရေး လက်ရှောင်တာကို ဆန့်ကျင်တယ်
ဦးမှူးဇော် ပါဆင်နယ်လိုလို တရားဝင်လိုလို လျှောက်ရေးနေတာကို လက်မခံ
ပြည်သူမှာ လက်နက်မရှိတဲ့အတွက် စစ်တပ်ဝင်တာကို အားပေးတယ်
လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ကာဖျူးလုပ်ထားတာလည်း အားပေးတယ်
သမ္မတ မိန့်ခွန်းက မထိရောက်ဖူးလို့ ထင်တယ်
ဟိုမုဒိန်းကောင် သေတာ (သို့) အသတ်ခံရတာဟာ အစိုးရရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ အစီအမံ (သို့) လုပ်ရပ်လို့ မြင်တယ်။
ဒီကိစ္စကို ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်မှာ မဟုတ်လို့ မြင်တယ်။
အစိုးရကတော့ အာဏာလက်နက်နဲ့ နှိပ်ကွပ်ပြီး ဒီအရေးကို ဒီမှာတင်ရပ်ဆိုပြီး ပြီးသွားစေလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
အဲလို ပြီးသွားတာဟာ ဘယ်တော့မှ မဆုံးတဲ့ အစတစ်ခု ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်း ယုံတယ်။
အိန္ဒိယ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ အာရပ်နိုင်ငံ အတော်များများကို ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အဆင်းရဲဆုံး လူနေမှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ လူတွေအများကြီးကို အဲဒီဒေသတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရဖူးတယ်။ သာမန်လူသား မေတ္တာတရားရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ငတ်ပြတ်၊ ဆင်းရဲ၊ စာမတတ် လူနေမှုဘဝ နိမ့်ကျ၊ နုံချာလှတဲ့ သူတို့ဘဝတွေကို မြင်ရတဲ့အခါ လူသားချင်း အနေနဲ့ အရမ်းကို ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ အခုလည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုဝင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတချို့ကို ကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါ လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာက ကြီးလွန်းပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့သာ ဟိုးအစကတည်းက နိုင်ငံတွင်းကို အတင်းအဓမ္မ လှိမ့်မဝင်ခဲ့ကြဘူးဆိုရင်၊ တကယ်လို့ သူတို့သာ စည်းကမ်းရှိရှိ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်၊ သူတို့သာ ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို လေးလေးစားစားနဲ့ ပြေပြေလည်လည် နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ သူတို့သာ ဒေသကောင်းကျိုး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းရာကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ သူတို့သာ အကြမ်းမဖက်ကြဘူးဆိုရင်၊ သူတို့သာ တိုင်းရင်းသားဇာတ်ထဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတင်းမသွတ်သွင်းဘူးဆိုရင် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အမုန်းတရား အဲဒီလောက် ကြီးထွားသွားဖို့ရာ မရှိပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဟိုးတုန်းကတည်းက ဘာသာလူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်ခဲ့ကြတာပဲ။ Kick them out, Fight them Back ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို လက်ခံနိုင်စွမ်း ရှိပေမယ့် Kill them all ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို ကြားရတဲ့အခါ အလွန်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အခုပြဿနာက အခုမှစတဲ့ဟာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်ဆာလို အမြစ်တွယ်နေတာ ကြာလှပြီ။ အစကတည်းက စစ်ဆေး ဆေးကု ဖယ်သင့်တဲ့ အမြစ်တွေဖယ်၊ ထုတ်သင့်တာထုတ်၊ ကင်သင့်တာကင် လုပ်ခဲ့ရမယ့်ဟာ အခုတော့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အဆုံးမှာမှ ဆေးကုတော့မယ် ဆိုတဲ့အခါ ဆဲလ်တွေကလည်း အရမ်းပွားနေခဲ့ပြီ။ ကိုယ်တွေဆီမှာလည်း မနေစေချင်ဘူး (ကိုယ့်ဆီမှာတော့ ၂ သန်းလောက်က ရောက်နှင့်နေပြီ) သူများ ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်း လက်မခံဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီလူတွေအကုန်ကို သတ်ပစ်လိုက်ပေါ့ ဒီလိုလား။ ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ဒီပြဿနာတွေ အမုန်းတရားတွေဟာ ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန် ကောင်းကောင်းများ ရှိသလား။ ကင်ဆာရောဂါကုထုံးတွေက ကင်ဆာကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်ပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားနေမိတယ်ဗျာ။
ဝန်ကြီးတွေ ဒေါ်လာဈေးကျနေလို့ဆိုပြီး သိပ်ပြောတယ်။ ၁၀၀၀ ကျော်အထိ တက်အောင် လုပ်မယ်လို့လည်း ခဏခဏ ပြောကြတယ်။ အစီအစဉ်လည်း ရှိတယ်တဲ့။ ဒေါ်လာဝယ်စုပြီး ကိုင်ထားလိုက်ရင် သေချာပေါက်မြတ်မယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ သတင်းတွေမှာ Transperancy ရှိဖို့ Updated ဖြစ်ဖို့တွေဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုဟာက အထောက်အထား ခိုင်လုံဖို့ခက်တဲ့ အွန်လိုင်း တစ်ယောက်ချင်း စကားတွေကိုပဲ လိုက်နားထောင်နေရပါတယ်။ ဒီနေ့ သတင်းစာထဲအထိတောင် အဲဒီသတင်း ထည့်မထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ သတင်းကို သတင်းအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်း သိချင်ပါတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရ ဆုံးဖြတ်တာကသာ အစိုးရအပိုင်းပါ ဦး Hmuu Zaw ခင်ဗျာ။ ပြည်သူလူထုမှာလည်း ဘက်မလိုက်တဲ့ သတင်းမှန် သိခွင့်ရှိသင့်ပါတယ်။
အင်း ကိုယ်တွေလည်း အထက(၃) ကဆိုတော့ ကချင်သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးပဲ။ မြစ်ကြီးနားဆိုတာ ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ နေရာတွေထဲမှာ အပျော်ဆုံး နေရာတစ်ခုပဲ။ အခုလို လူမျိုးရေး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး။ ကချင်တွေက ဗမာတွေကို မုန်းတယ်။ စစ်တပ်ဆိုရင်လည်း ဗမာစစ်တပ်လို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် စစ်တပ်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေကို နေရာ မပေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ပြောပြန်တော့လည်း ဒါကိုလည်း မခံစားနိုင်ဘူး။ ဗမာတွေ ဆင်းရဲမွဲတေနေတာလည်း အများကြီးမှ အများကြီး။ ကချင်ပြည်နယ်လို့ ဆိုရအောင်လည်း နေနေကြတာက လူမျိုးပေါင်းစုံ။ ဒီတော့ကာ အကြောင်းရင်းမြစ်ကို ဖြေရှင်းမှ ဒီပြဿနာက ရှင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ နေရာနဲ့ ပြောကြေးဆိုရင်တော့ ကချင်ပြည်နယ် ကွဲထွက်လည်း တရုတ်ပြည်ထဲ တစ်ချိန်ချိန် ပါသွားမှာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလူသတ်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲ တချို့ဂျာနယ် စာမျက်နှာတွေမှာ လင်ပါသားကို တရားခံအဖြစ် ရေးထားကြတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါပေယ့် အခုကျတော့ တချို့တွေက တင်ထားခဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ပြန်ဖျက်လိုက်ကြတယ်။ Popular Myanmar News ကတော့ သူတို့သတင်းမှားကြီးကို မဖျက်သေးဘူး။ ဒါမျိုးဆို တရားစွဲခံရနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ တချို့တွေကတော့ သတိကြီးကြီးနဲ့ ရေးတာ တွေ့ရတယ်။ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ သတင်းတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ဖြန့်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂရုပြုသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလို သတင်းမှား ရေးခဲ့မိရင်လည်း ပြန်တောင်းပန်သင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
မြန်မာပြည် အစိုးရလူကြီးတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံဖို့ အရေးကို ကြည့်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်တဲ့ လူတွေကို မဖြစ်မနေ အရည်အချင်း တစ်ရပ် အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပြီး ရွေးချယ် ခန့်အပ်သင့်ပါတယ်။ မနေ့က Yangon Heritage Trust Meeting မှာလည်း ဘာတွေ ပြောလို့ ပြောနေမှန်း မသိဘူး။ အတော်ညံ့တယ်။ သံအမတ်တွေ၊ သံတမန်တွေ အဖြစ်နဲ့ လာပြီး အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်လို့ ဟိုရောက်မှ အတင်းအဓမ္မ အင်္ဂလိပ်စာ ပြန်သင်နေရသူတွေ၊ သူများတာကိုယ်နားမလည် ကိုယ်ပြောတာ သူနားမလည်လို့ ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့် လုပ်နေရတဲ့သူတွေ၊ ပြောရမှာကြောက်လို့ Diplomat Party မှန်သမျှ ရှောင်တဲ့သူတွေ အများကြီး တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။
Posted by NLS at 7/01/2012 02:27:00 PM5comments Links to this post